News Collection: केटीहरू चाहन्छन् ब्याड ब्वाइज
केटीहरू चाहन्छन् ब्याड ब्वाइज
उटा सर्वेक्षणअनुसार दबंग वा खराब खालका युवाहरूले पनि युवतीहरूलाई आकषिर्त गर्छन्। उनीहरू त्यस्ता युवकबाट प्रभावित मात्र नभई, उनीहरूको प्रेममा पनि पर्छन्। त्यस्ता युवकहरूमा त्यस्तो के हुन्छ जसले असल युवतीहरू उनीहरूतर्फ आकषिर्त हुन्छन् ? कति दीर्घकालीन हुन्छ यस्तो सम्बन्ध ?
पूर्व युवराज पारसलाई आकर्षक पुरुषका रूपमा छनौट गर्दा मोडल सहाना बज्राचार्यसँग सोधियो, किन ? उनले भनिन्- 'रफटफ स्टाइल र ब्याड ब्वाइ इमेजका कारण।' पारसलाई सहानाले सीधै नराम्रो केटा भनेकी होइनन्, तर विभिन्न स्क्यान्डलका कारण पारसको जुन ब्याड ब्वाइको इमेज बनेको छ, त्यसतर्फ इंगित गरेकी हुन्। पारसको सुन्दर शारीरिक बनावटका साथमा आक्रामक हाउभाउ, फ्रेन्चकट दार्‍हीमा चलचित्रको खलनायकजस्तो लाग्ने व्यक्तित्व, जो-कोहीलाई तर्साउन सक्ने उनको व्यवहारजस्ता कारण त्यसका लागि जिम्मेवार हुन सक्छन्, बलिउडका सलमान खान जस्तै पारस अट्रयाक्टिभ ब्याड ब्वाईको राम्रो नेपाली उदाहरण बनेका छन्।
असल, नम्र र भद्र युवकको सट्टा युवतीहरू किन स्वार्थी, ढँटुवा, गफाडी, अभद्र युवकलाई मन पराउँछन्? यसको जवाफ वैज्ञानिकहरूले खोजेका छन्। वैज्ञानिकहरूका अनुसार स्वाभाविक ढंगमै युवतीहरू खराब युवकतर्फ आकषिर्त भैरहेका हुन्छन् अनि केही समय पछि उनीहरूले मूल्याकंन गर्दै आफैंसँग सोध्छन्, म किन सधैं बास्टर्ड नै फेला पार्छु ?
साप्ताहिकको सर्वेक्षणमा सर्वोत्कृष्ट आकर्षक महिलाको उपाधि पाएकी माल्भिका सुब्बालाई पनि कुनै बेला ब्याड ब्वाइ अट्रयाक्सनले छोएको थियो। 'त्यो उमेर नै त्यस्तो हो जस्तो लाग्छ,' माल्भिकाले हाँस्दै भनिन्- 'खराब केटो भन्ने जानेर नै ऊप्रति आकर्षण बढिरहेको हुन्छ।' माल्भिकाका अनुसार प्लस टु पढ्दाताका हातमा गीटार बोक्ने, गीत गाउने, अरूलाई हल्का पिटपाट पनि गर्ने, आफूलाई डनजस्तो देखाउने उसको बानी बेहोराले माल्भिकाको मन आकषिर्त गरेको थियो। 'ऊ पढ्न भन्दा शो-अपमा ध्यान दिन्थ्यो, माल्भिका सम्झन्छिन्- आफूतर्फ सबैको ध्यान खिच्ने ऊ राम्रोभन्दा नराम्रो कामका लागि परिचित थियो।'
लभ-सेक्सका मामिलामा पारसको ब्याड ब्वाइज इमेज देखिएको छैन, तर अन्य स्क्यान्डलमा पारसको दबंग शैलीकै कारण पनि युवतीहरू उनमा अलग किसिमको आकर्षण पाउँछन्। जेभियर इन्टरनेसनल कालो पुलमा अध्ययनरत शिखा लोहनीका अनुसार पारसको एटिच्युडमै अपिलिङ छ। उनीसँग सर्वसाधारण नारीहरूको सम्बन्ध त्यति जमेको देखिँदैन, तर पनि उनी आफ्नो छवि अर्थात् ब्याड ब्वाई इमेजकै कारण आकर्षक पुरुषमा भने परिरहेका छन्।
१६-१७ को उमेर नै त्यस्तो भएर हुनसक्छ, टिनएजर युवतीको नजर ब्याड-ब्वाइतर्फ खिचिन्छ। सुन्दरी माल्भिका सुब्बाका अनुसार शारीरिक रूपमा आएका थुप्रै परिवर्तनका कारण युवतीहरूको विपरितलिंगीतर्फ चासो बढिरहेको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा रफ टफ र पपुलर योङ ब्वाइतर्फ ध्यान केन्दि्रत हुनु स्वाभाविक पनि हो।
तनुजा बराल स्कुले उमेरको आफ्नो पहिलो प्रेम सम्झन्छिन्। विराटनगरकी तनुजाका अनुसार कक्षा १० पढ्दाताका उनका हिरो स्थानीय एक तेक्वान्दो गुरु थिए। ती गुरुको रवाफ नै भिन्दै थियो। हाल क्यानाडामा रहेकी तनुजाले भनिन्- 'हेर्दा पनि राम्रा उनका अगाडि जो-कोही डराउँथे, साँच्चैको हिरो त ती गुरु नै रहेछन् जस्तो लाग्थ्यो।' तनुजाका अनुसार तत्कालीन समयमा संजय दत्तजस्तो आक्रामक फिगर भएका ती ते क्वान्दो गुरु दादा नै थिए, उनीसँगको सम्बन्धले अरू कसैले तनुजाको नजिक आउने आँट पनि गर्दैनथे। 'ती तेक्वान्दो गुरु त्यसबेला ब्याड ब्वाइको राम्रो उदाहरण मानिन्थे,' तनुजा भन्छिन्- तर त्यही ब्याड ब्वाई त्यसबेला आइडियल लाग्थ्यो।'
माल्भिका पनि सम्झन्छिन्, प्लस टु अध्ययनको समयमा उनको सञ्जय दत्त, सलमान खानसँग क्रस हुन्थ्यो। हट्टाकट्टा, बडी बिल्डर यी नायकजस्तै ड्रिम ब्वाइको कल्पना हुन्थ्यो। भरसक त सञ्जय दत्त र सलमान खानसँग भेट्ने तथा उनीहरूसँग फिलिङ्स सेयर गर्ने चाहना हुन्थ्यो। माल्भिका भन्छिन्— बलिउडको राम्रो प्रभाव परेको नेपाली समाजमा अजय देवगण, अक्षय कुमार, शाहरूख खानजस्ता नायकहरू पनि क्रसमा परे। त्यसबाहेक नेपाली नायक राजेश हमाल पनि उत्तिकै आकर्षणमा रहे। अहिलेको पुस्तामा पनि त्यो हुन्छ, साहित्यकार अभि सुवेदीले भनेजस्तै चलचित्रको प्रभाव नेपाली समाजमा राम्रैसँग परेको छ। बलिउड प्रभावकै कारण हुनसक्छ, हाम्रा युवाहरू त्यही चरित्रमा आफूलाई प्रस्तुत गर्छन्, अनि युवतीहरू पनि युवाहरूको त्यो नक्कलबाट आकषिर्त हुन्छन्।
खलनायकीपन होस् वा दबंग स्टाइल नै किन नहोस्, यसले एक प्रकारको प्रभाव छोड्छ। सञ्जय दत्त, सलमान खान यसैकारण सधैं आकर्षक लाग्छन्। माल्भिका मात्र होइन, त्यो जेनरेसनका थुप्रै युवती उनीहरूप्रति भुतुक्कै हुन्थे। अहिले पनि सलमान खान ब्याड ब्वाइ इमेजका साथ आकर्षक पुरुषमा पहिलो स्थानमै छन्।
ब्याड ब्वाई इमेजको इतिहास खोतल्ने हो भने यो मामिलामा पश्चिमा समाज धेरै अगाडि छ। यस विषयमा पश्चिमा समाजले थुप्रै बहस पनि गरिसकेको छ, उदाहरणका लागि अनलाइन संस्करण डब्लुडब्लुडब्लुडट ह्वाई वुमन लभ बास्र्टड डट कम हेरे पुग्छ। कसरी बास्टर्ड अर्थात् ब्याड ब्वाइ इमेज बनाउने भन्ने थुप्रै उपाय सुझाउने टिग्रेस लभद्वारा लिखित 'वुमन रियल्ली डु लभ बास्टर्ड' को प्रचार त्यहाँ छ। त्यतिमात्र होइन, रिलेसनसिप र ब्रेकअपका लागि यो साइटले सहयोगीको भूमिका पनि खेल्छ। यो साइटका सदस्यहरूले खुलेर ब्याड ब्वाइ इमेज र प्रे मसम्बन्धी अन्य बहस पनि गर्न सक्छन्। साइटमा असल युवकहरूले आफू युवतीहरूको आकर्षणमा नपरेको पीडामा खराब युवकहरूलाई कुट्न आह्वान गरेका छन्। स्यान नेम्यान लिखित अ बास्र्टड्स गाइड टु डेटिङजस्ता पुस्तकले बास्र्टड अर्थात ब्याड ब्वाइ इमेज विकसित गर्ने उपाय सिकाएका छन्। 'असल युवक भएर हिँड्दा म हात लाग्यो शून्यको स्थितिमा थिए,' साइटमा एक युवक क्रेप्स डन लेख्छन्- 'सधैं बास्टडर् हरू नै राम्री युवती हासिल गर्ने भाग्यमानी बन्छन्, मलाई चाहिँ सबैले अस्वीकार गर्छन्, तर मैले आफ्नो गल्ती थाहा पाए।' बास्टर्ड बन्ने उपायसहितको टि्रगेस लभको पुस्तक पढेपछि आश्चर्यजनक रूपमा राम्री युवतीलाई दुलहीका रूपमा भित्र्याउन पाएको उनले त्यहाँ बताएका छन्।
पौडीका कीर्तिमानधारी माइकल फ्लेप्स, गल्फका टाइगर उडदेखि किशोर पप गायक जस्टिन बिबरसम्म सबैले ब्याड ब्वाइ इमेजमा एक कदम अघि बढेर चर्तिकला देखाएका छन्। सेलिब्रेटी भएपछि उनीहरू आकर्षणमा पर्नु त स्वाभाविक हो, तर उनीहरू युवतीलाई प्रयोग गर्न माहिर छन्, प्रयोग गरिसकेपछि छोड्ने प्रवृत्तिका सम्बन्धमा जानकारी हुँदाहँुदै पनि युवतीहरू उनीहरूकै सामीप्यता खोज्छन्।
नेपाली समाजमा हेर्ने हो भने, दादागिरी, खेलाडी वा गायकजस्ता परिचय बनाएपछि त्यस्ता युवाको भित्री मन नबुझी युवतीहरू आकषिर्त हुन्छन्। लामो केश, चुच्चे डिंगो बुट, प्यारेलल पाइन्ट ब्याड ब्वाइ इमेज झल्काउने कुनै बेलाको फेसन थियो भने अहिले रफटफ, खासगरी दार्‍ही-जुँगा र छोटा नयाँ हेयर स्टाइल, चुज र फिटिङ स्क्राच ड्रेस ब्याड ब्वाइ फेसन ट्रेन्ड हो। ब्याड ब्वाइ इमेजका युवाहरूको बोल्ने स्टाइल, उनीहरूको व्यवहारले नै उनीहरूप्रति आकर्षण बढाउने शिखा लोहनी बताउँछिन्। खै कसरी हो, उनीहरूसँग खर्च गर्ने पैसा पनि प्रसस्त हुन्छ, उनले आफ्नै अनुभव सुनाइन्, त्यो डे्डली हेराइले एकप्रकारको साइकोजिकल टि्रगर काम गरिरहेको हुन्छ अनि उ सेक्सी लाग्न थाल्छ।' भाइगिरी शैलीले युवतीहरूलाई तान्छ, शिखाका अनुसार उनीहरूसँगको सामीप्यता अर्थात अफेयरमा युवतीहरूले संरक्षकत्व पनि पाइरहेकी हुन्छन्। युवतीले खोज्ने पनि यस्तै केयरिङ हो।
केही प्रख्यात ब्याड ब्वाइ
ब्याड ब्वाइ इमेज कुनै स्क्यान्डल वा हंगामा गर्नुमा मात्र सीमित छैन। नौलो किसिमका खुराफातमा मनलगाउनेहरू पनि ब्याड ब्वाईको श्रे णीमा पर्छन्। वैज्ञानिक थोमस अल्वा एडिसन पनि यहि श्रेणीको ब्याड ब्वाइमा पर्थे। उनी बाल्यवस्थादेखि नै एकदमै बदमास थिए। एकपटक उनले काम गर्ने नोकर्नीलाई पुतलीहरू र अन्य उड्ने प्रजातिका केही कीराको अचार पिसेर ख्वाएका थिए। पुतली खाएपछि नोकर्नी पुतली र अन्य कीराहरू झैं उड्छे अनि मानिस पनि पन्छीहरूझैं आकाशमा उड्न सक्छन् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने उद्देश्य राखेर उनले उक्त हरकत गरेका थिए। यद्यपि पछि त्यो एउटा हाँस्ने राम्रो बहाना बन्यो। यो प्रयोगमा नोकर्नीले धेरै पटक बान्ता गरेपछि एडिसनलाई घरका सबै सदस्यले गाली गरेका थिए।
विश्वकै धनी विल गेट्स पनि गुड ब्वाईको सूचीमा रहन सकेनन्। डेढ दशकयता विश्व हल्लाउने धनी व्यक्ति भए पनि उनी यो स्थानसम्म पुगुन्जेल राम्रो व्यक्ति वा असल युवकका रूपमा परिचित थिएनन्। उनी सानैदेखि ब्याड ब्वाइकै रूपमा चिनिएका थिए। बिल गेट्स पढ्ने मामिलामा पनि उत्तिकै लापरवाह थिए। स्कुले जीवनमा उनीबाट शिक्षक कहिल्यै प्रसन्न रहेनन्। बिल गेट्स अक्सर क्लास बंक गर्ने विद्यार्थी थिए, तर उनको दिमाग अर्थात मस्तिष्क चेतना भनें सधैं गुड ब्वाइका रूपमा चिनिनेहरू भन्दा एक कदम अगाडि रहन्थ्यो। पुष्टि गरिरहनु आवश्यक पनि छैन, किनभने उनले कम्प्युटरको क्षेत्रमा जुन सफलता हात पारे, त्यसको कल्पना साधारण दिमागवालाको सामथ्र्यभन्दा धेरै परको कुरा थियो।
श्रीमदभागवत महापुराणका मुख्य पात्र भगवान श्रीकृष्णलाई भक्तहरूले गुड ब्वाइका रूपमा पुजे पनि उनका क्रियाकलापले उनलाई ब्याड ब्वाई इमेज प्रदान गर्छन्। भगवान् कृष्ण बाल्यकालमा एकदमै चकचके र बदमास थिए। उनीसँग प्रेम गर्ने गोपिनीहरूको संख्याले रासलीलामा उनी एकदमै माहिर थिए भन्ने प्रस्ट पार्छ। धर्मरक्षाका निम्ति युद्धको जाल बुन्ने भगवान् कृष्ण बुद्धि, विद्या र शक्तिको उपयोग गर्न कति माहिर थिए भन्ने देखिन्छ।
यस्ता व्यक्तिहरू, जो आज सफलताको शिखरमा छन् उनीहरू पनि ब्याड ब्वाइ इमेजबाट मुक्त छैनन्। हिन्दी चलचित्रमा सलमान खानको राज चलिरहेको बेला हो अहिले, उनी कतिसम्मका ब्याड ब्वाइ हुन् भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ। बलिउडमा अमिताभ बच्चनदेखि इमरान हासमीसम्म ब्याड ब्वाई इमेजलाई पर्दामा प्रतिनिधित्व गरेर शिखरमा छन्। अमिताभ बच्चनको वास्तविक छवि गुड ब्वाइको भए पनि उनी पर्दामा प्रायः ब्याड ब्वाईको भूमिकामा देखिए। क्रिकेटको मैदानका चर्चित खेलाडी सोएब अख्तर पनि ब्याड ब्वाई इमेजले अझ चर्चित भए। उनले बलिङ गर्दा सधैं आक्रामक एटिच्युड देखाए, बाहिरी जीवनमा पनि उनी थुप्रै स्क्यान्डलले ब्याड ब्वाइको इमेज हासिल गर्न सफल भए। उनको रिसाहा बाघ शैलीको हेराइले पनि कतिपय खेलाडीको सातो जान्थ्यो। क्रिकेटरहरू शेनवार्न, एन्ड्रयु साइमन्डमा पनि यस प्रकारको एटिच्युड देखिन्थ्यो। फुटबलका चर्चित खेलाडीहरू क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वायन रुनीमा पनि एग्रेसिभ एटिच्युड छ।
ब्याड ब्वाइ र गुड ब्वाइको बीचमा सधैं नै एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा रहँदै आएको छ। यो प्रतिद्वन्द्वितामा अक्सर बिना लडाइँ ब्याड ब्वाइले हारे को भनेर घोषित गरिन्थ्यो। ब्याड ब्वाइलाई सधैं गुड ब्वाइको तुलनामा तल देखाइन्थ्यो, तर समयले कोल्टे फेरेको छ। आज गुड ब्वाइ त्यो स्थानमा छ, जुन स्थानमा कुनै बेला ब्याड ब्वाइ हुन्थ्यो र ब्याड ब्वाइ त्यो स्थानमा छ, कुनै बेला गुड ब्वाइ त्यो स्थानमा थियो।
आकर्षण ब्याड ब्वाइजको
एउटा सर्वेक्षणअनुसार दबंग वा खराब खालका युवाहरूले पनि युवतीहरूलाई आकषिर्त गर्छन्। उनीहरू त्यस्ता युवकबाट प्रभावित मात्र नभई, उनीहरूको प्रेममा पनि पर्छन्। त्यस्ता युवकहरूमा त्यस्तो के हुन्छ जसले असल युवतीहरू उनीहरूतर्फ आकषिर्त हुन्छन् ? कति दीर्घकालीन हुन्छ यस्तो सम्बन्ध ?
न्यु साइन्टिस्ट पत्रिकाका अनुसार अमेरिकी अनुसन्धानकर्ताहरूले ५७ राष्ट्रमा करिब ३५ हजार व्यक्तिमा गरेको एउटा सर्वेक्षणअनुसार आक्रमक, कठोर, चलाक र मतलबी खालका पुरुष युवतीहरूसित फ्लर्टिङ गर्ने मामिलामा अघि मात्र हुँदैनन् उनीहरूको यौनजीवन पनि राम्रो हुन्छ। उक्त सर्वेक्षणको परिणामलाई केही समयअघि जापानको क्योटो सहरमा आयोजित ह्युमन बिहेवियर एन्ड इभोल्युसन सोसाइटीको बै ठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो। उक्त अनुसन्धानका क्रममा युवतीहरूको गुड लिस्टमा इमानदार, विनम्र, विश्वासिलो एवं शालीन पुरुष कमै पाइयो। जेम्स बोन्ड जस्तो चरित्रले ब्याड ब्वाइजलाई बुझ्न धेरै हदसम्म मद्दत गर्छ। यस्ता व्यक्तिले सम्झौता गर्दैनन्, स्पष्टवादी हुन्छन्। उनीहरू जोखिमपूर्ण कामप्रति आकषिर्त हुन्छन्। उनीहरूलाई युवतीहरूलाई कसरी आकषिर्त गर्नुपर्छ भन्ने उपाय राम्रोसँग थाहा हुन्छ। युवतीहरूसितको सम्बन्धबाट उनीहरू चाँडै दिक्क हुन्छन्। तुरुन्तै नयाँ सम्बन्धको खोजीमा लाग्छन्।
युवतीहरू यस्ता ब्याड ब्वाइजलाई किन रुचाउँछन् ? यो जटिल प्रश्न हो। यहाँ दुई विपरीत धु्रवका बीचको आकर्षणको सिद्धान्तले पनि काम गर्छ। प्रायः युवती सीधा-शालीन तरिकाबाट अघि बढेका एवं सुरक्षित परिवेशमा हुर्किएका हुन्छन्। जब उनीहरू एकाएक विपरीत स्वभावका पुरुषसित परिचित हुन्छन् तब उनीहरू तिनीहरूबाट प्रभावित हुन्छन्। कैयन अवस्थामा उनीहरू आफ्नो मनसमेत हार्न पुग्छन् अर्थात् प्रेममा पर्छन्।
प्रायः युवतीलाई एउटा सुरक्षित छहारी आवश्यक हुन्छ। उनीहरूलाई बाहिरी संसार असुरक्षित महसुस हुन्छ। यस स्थितिमा कुनै व्यक्ति संरक्षक भएर उभिन्छ भने उनीहरू प्रभावित नभइ रहन सक्दैनन्। बाल्यावस्थामा उनीहरू आफ्ना बुबा वा दाजुभाइको संरक्षणमा रहन्छन्। त्यसैले उनीहरू पिता वा दाजुभाइको कठोर छवी ती ब्याड ब्वाइजमा देख्छन्। त्यसैले आक्रामक, क्रोधी र हावी हुने खालका पुरुष उनीहरूलाई राम्रा लाग्छन्। भनिन्छ, युवतीहरू आफ्नो बुबाबाट र युवकहरू आफ्नी आमाबाट प्रभावित हुन्छ। उनीहरू आफ्नो अवचेतनमा आफ्ना पति वा प्रेमीमा पनि तिनै गुण खोज्छन्, जुन उनीहरूको पितामा हुन्छ। त्यसैले नराम्रा केटाहरूको त्यही क्रोधी र कठोर मानसिकताले उनीहरूलाई प्रभावित गर्छ।
मानिसले निषेध गरिएको कुरालाई तोड्न चाहन्छ। नराम्रा केटाहरू नियमको वास्ता गर्दैनन्। उनीहरू समाजसित लड्न तयार हुन्छन्। उनीहरू को आफ्नै मूल्य-मान्यता हुन्छ र उनीहरू आफूले बनाएको बाटोमा अघि बढ्छन्। यी कुराले पनि युवतीहरूलाई आकषिर्त गर्छ। यसको एउटा कारण के पनि हो भने उनीहरू स्वयं ती बाधाहरू तोड्ने साहस गर्न सक्दैनन्। त्यसैले पनि त्यस्ता पुरुषले उनीहरूलाई आकषिर्त गर्छन्।
नराम्रा केटाहरूको व्यक्तित्व आकर्षक हुनुका पछाडि कुनै वैज्ञानिक आधार छैन तर प्रायः उनीहरूको व्यक्तित्व प्रभावशाली हुन्छ। वास्तवमा उनीहरू आफ्नो आन्तरिक सौन्दर्यको कमीलाई बाहिरी व्यक्तित्वबाट पूरा गर्ने चाहना राख्छन् त्यसैले उनीहरू आफ्नो बाहिरी सुन्दरतालाई निखार्न पूरा प्रयास गर्छन्। उनीहरू स्टाइलिस हुन्छन्। उनीहरूको हाउभाउ, कुराकानी गर्ने शैली र रहस्यमय व्यक्तित्वको प्रभावमा युवतीहरू चाँडै आउँछन्।
युवतीहरू यस्ता ब्याड ब्याइजको साथ पाउँदा सुरक्षित महसुस गर्छन् साथै स्वयंलाई पनि बलवान सम्झन्छन्। युवतीहरू ब्याड ब्वाइजलाई नै जीवनसाथी बनाउँछन् वा बनाउन चाहन्छन् भन्ने होइन। केही समयका लागि उनीहरू दबंग प्रवृत्तिका व्यक्तिबाट प्रभावित हुन सक्छन् तर उनीहरू तिनका अवगुणप्रति वास्तै गर्दैनन् भन्ने पनि होइन। उनीहरू तिनीसित घुमफिर गर्न रुचाउँछन् तर जीवनसाथीका रूपमा अधिकांश युवतीलाई राम्रो र केयरिङ पुरुष नै मनपर्छन्। हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसर स्टीवन पिन्कर भन्छन्- 'अधिकांश युवतीको चाहनामा त्यस्ता पुरुष हुन्छन् जो उनीहरूप्रति उदार र समाजप्रति आक्रामक हुन्छ। उनीहरूलाई यस्ता पुरुषको स्मार्टनेस र ताकत मनपर्छ। अर्को ठूलो कारण, यस्ता पुरुषले उनीहरूलाई र उनीहरूका बालबालिकालाई बढी सुरक्षा प्रदान गर्छन्। मनोचिकित्सकहरूका अनुसार प्रायः युवती त्यस्ता पुरु षलाई आफूले सुधार्न सक्छु भन्ने मान्छन् र यो कार्यलाई उनीहरू चुनौतीका रूपमा ग्रहण गर्छन्।
यस्ता सम्बन्ध कति दीर्घकालीन हुन्छन् ? यसको उत्तर हुन्छ, केही टाढासम्म। यस्तो हतारको रोमान्सको अन्त पनि हतारमै हुन्छ। कारण आकर्षणको आधारशीलामा मात्र जीवन निर्वाह गर्न सकिँदैन। कोही पनि आफ्ना पति वा प्रेमीलाई जेल सजाय होस् भन्ने चाहँदैनन्। फलस्वरूप तीव्र रूपमा यो आकर्षण घृणामा परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसैले राम्रो र असल पुरुषले निराश हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। कैयन अनुसन्धानले यही प्रमाणित गरेका छन् कि यस्तो आकर्षणको आयु धेरै लामो हुँदैन। युवतीहरूले केही विशेष उद्देश्यका लागि वा केही समयका लागि यस्ता साथी चयन गरे पनि जीवन जिउनका लागि उनीहरू त्यस्तै व्यक्तिको हात समाउँछन् जो राम्रो हुन्छ र जसले उमेरभर उसको हेरचाह गर्न सक्छ, जिम्मेवारी वहन गर्न सक्छ।
किन युवतीहरू खराब केटा मन पराउँछन् ?
असल, नम्र र भद्र युवकको सट्टा युवतीहरू किन स्वार्थी, ढँटुवा, गफाडी, अभद्र युवकलाई मन पराउँछन्। यसको जवाफ वैज्ञानिकहरूले खोजे का छन्। वैज्ञानिकहरूका अनुसार स्वाभाविक ढंगमै युवतीहरू खराब युवकतर्फ आकषिर्त भैरहेका हुन्छन् अनि केही समय पछि उनीहरूले मूल्याकंन गर्दै आफैंसँग सोध्छन्, म किन सधैं बास्टर्ड नै फेला पार्छु ? न्यू मेक्सिको स्टेट युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार यसमा तीन खराब तत्वले काम गर्छन्। उनीहरूले ती तत्त्वलाई 'डार्क-ट्राइड' नाम दिएका छन्। ती तीन तत्व न्यार्सिसिज्म, म्याकियाभेलिनिज्म, साइकोप्याथी हुन्। यस्ता तत्त्व भएका खराब केटा जसरी पनि महिलालाई फसाउन लागिपर्ने स्वभावका हुन्छन्। खराब केटामा रहने तीन तत्वलाई नेपालीकरण गर्दा न्यार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीले कम सहानुभूति भएको अंहकारी र पूर्ण स्वार्थी भएको अर्थ दिन्छ, त्यस्तै म्याकियाभे लियन पर्सनालिटीले धुर्त, शोषक, ढाँट्नमा अब्बललाई प्रतिनिधित्व गर्छन्। यसबाहेक द साइकोप्याथ पर्सनालिटी अर्थात् एन्टि सोसियल पसर् नालिटीले परिणामको ख्याल नगरी आवेशमा आएर गलत बाटो अख्तियार गर्ने, सतही आकर्षणमा रोमाञ्चको मज्जा लिन खोज्ने स्वभाव जनाउँछ।
पश्चिमाहरूले यी तीन तत्त्व सामेल भएको राम्रो प्रतिनिधि पात्रका रूपमा जेम्स बन्डको उदाहरण दिएका छन्। जेम्स बन्ड संवेदनशील पुरुष होइनन्, तर उनले सधैं राम्री युवती फेला पार्छन्। यी तत्त्व भएका युवाहरूलाई युवतीहरू जिस्किने, ठट्यौली मन पराउने युवकका रूपमा हेछर् न र उसको कुरा सुनेर रमाउँछन्। युवतीहरू त्यस्ता युवकलाई आत्मविश्वासी मान्छन् र लहसिन्छन्। युवतीहरूलाई यस्ता युवक ढुसी हुन्, जसले आफ्नो विष युवतीहरूलाई सारिरहेका छन् भन्ने थाहा हुँदैन, जतिबेला उनीहरूले यो वास्तविकता बुझ्छन, समय हुइँकिसकेको हुन्छ।
इलिनोइसस्थित ब्राड्ली युनिभर्सिटीका डेभिड स्मिथले भर्खरै क्योटोमा सम्पन्न मानव व्यवहार र समाज विकाससम्बन्धी सम्मेलनमा यो विषयमा आफ्नो अध्ययन पेस गरेका थिए। उनले खराब युवक आकर्षणको प्रवृत्ति पश्चिमा समाजमा मात्र सीमित नभएर विभिन्न मुलुक र संस्कृतिमा देखा परिसकेको बताएका छन्। खराब युवक आकर्षण भाइरस जसरी फैलिइरहेको छ।
पुरुष-पुरुष आपसमै ?
हेटौंडा— यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको क्षेत्रमा सक्रिय ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले ३ वर्षदेखि गरेको अध्ययनअनुसार मकवानपुरमा ३ हजार ७२ जना पुरुष-पुरुष यौनसम्पर्क राख्नेहरूका साथै यौनव्यबसायी पुरुष पनि फेलापरेका छन्। यो संख्या अझ बढी हुनसक्छ। संस्थाका जिल्ला प्रोजेक्ट अधिकृत सुरज थापा यो आफैं खुलेर सहयोगका लागि आएका, फिल्डमा भेटिएका व्यक्तिहरूको संख्या मात्र भएकाले यो आँकडा उक्लँदै जाने अनुमान गर्छन्।
यसै सम्बन्धी काम गर्दै आएका पुरुष समलिंगी विनोद शर्मा पनि समलिंगी र तेस्रोलिंगीमा यौनरोग संक्रमणको जोखिम बढ्दो भएको बताउ ँछन्। 'महिला र पुरुषको यौनसम्पर्कभन्दा पुरुष-पुरुष सम्पर्क २० गुणा असुरक्षित छ', शर्मा भन्छन्, 'त्यसैले समलिंगी र तेस्रोलिंगीमा यौनरोग संक्रमणको जोखिम उच्च छ।' थापाका अनुसार अझ यौन व्यवसाय गर्ने पुरुषहरूमा यो जोखिम उच्च छ। पुरुष-पुरुष सम्पर्क गर्दा गुदामैथुन र मुखमैथुन गरेर आनन्द लिइन्छ तर यसो गर्नेहरूले कन्डम लगाउनुपर्छ भन्ने थाहा नपाउँदा समस्या उत्पन्न भएको शर्मा बताउँछन्, जसका कारण यस्तो सम्पर्क गर्नेहरूमा एचआईभी/एड्सलगायत यौनजन्य संक्रमणमा वृद्धि हुने डर छ।
महिला र पुरुषबीच सम्पर्क हुँदा मात्र कन्डम लगाउनुपर्छ भन्ने अज्ञानताका कारण पुरुष-पुरुष सम्पर्क गर्दा यौनजन्य जोखिम बढी हुने थापाको तर्क छ। 'गुदामैथुन र मुखमैथुनका क्रममा कन्डम नलगाउँदा यौनजन्य रोग सर्नसक्ने सम्भावना उच्च छ', उनले भने, 'त्यसैले पुरुष -पुरुष सम्पर्क गर्नेहरू यौनजन्य संक्रमणको जोखिममा छन्।' केही तेस्रोलिंगीले यौनलाई पेसा नै बनाएकाले जोखिम थप बढेको थापाको ठम्याइ छ। महिलासँग सम्पर्क गर्दा योनिरसका कारण कन्डम फुट्ने जोखिम कम भए पनि पुरुष-पुरुष सम्पर्कमा कन्डम फुट्ने सम्भावना बढी छ। गुदद्वारमा योनिरस नहुने भएकाले कन्डम प्रयोग गरेपछि फुट्ने सम्भावना हुन्छ। कन्डम फुट्दा जोखिम हुने भैहाल्यो।
पुरुष-पुरुष सम्पर्क गर्दा दुर्घटना भएका उदाहरण पनि छन्। यौनआनन्दका लागि गरिएको सम्पर्कमा दुर्घटना हुँदा धेरैजना आपत्मा पर्ने गरेका छन्। पुरुष-पुरुष पहिलो पटक सम्पर्क गर्दा गुदद्वारबाट रगत आउने, च्यातिने समस्या पनि देखिने ब्लु डायमन्ड सोसाइटीका सुरज थापा बताउँछन्। यस्तो समस्या लिएर मानिसहरू आउने गरेको थापाले जानकारी दिए। यस्तो सम्पर्कलाई अप्राकृतिक मानिंदा समस्या अझ बल्झिएको थापाको तर्क छ। 'समलिंगी सम्पर्क पनि प्राकृतिक नै हो', थापाले भने, 'विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि यसलाई मान्यता दिइसकेको छ।'